175W Na-anọchi Ọdịdị Agbanwe, 175 Watt Led, 175W Metal Halide Led Mbụ emeputa na China
Nkọwa:175W Ngwakọta nke ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ,175 Watt Led,175W Mkpụrụ Na-acha Ọkụ Mmiri,175W Metal Halide Kwadoro Kwesịrị,,
Home > Ngwaahịa > Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ > 175w Metal Ride Replacement
Ngwaahịa nke 175w Metal Ride Replacement , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, 175W Ngwakọta nke ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ , 175 Watt Led suppliers / factory, wholesale high-quality products of 175W Mkpụrụ Na-acha Ọkụ Mmiri R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
60W Na-akpụkwa Lamps maka Metal Halide 175W  Kpọtụrụ ugbu a
60W Ruo na 175W Metal Halide Replacement  Kpọtụrụ ugbu a
60W Ọfụma Mkpụrụ Elu 200W Hps Kwesịrị Ekwesị  Kpọtụrụ ugbu a
60W Ebube Agbanwe Agbanwe 175W HID Replacement  Kpọtụrụ ugbu a
Mpempe akwụkwọ na-acha ọkụ ọkụ 175W Metal Halide Replacement  Kpọtụrụ ugbu a
Tụlee na ndị ọzọ dị ọnụ ala karịa Dugara Nnọchi Oriọna , Mgbanwe anyị na Hps jiri ike na-arụ ọrụ na-emepụta ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na windo na-emepụta ihe ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na steeti, onye ọkpụkpụ dịpụrụ adịpụ dịpụrụ adịpụ na onye nchebe nsị. Ngwa...
Bbier 60 Watts Metal Halide Dide Replacement E nwere ìhè dị ka 7,800 Lumens na nke a Metal Halide ruo na 30w nwere ike dochie anya 175 watt HPS / HID / HALIDE light.4000K agba aja na-eme ka a hụ ìhè ọkụ. Okpukpo uzo ogugu nke uzo nke 175W anyi bu...
Anyị 60w Ọkara Base Oriọna nwere ngwa ngwa jụrụ na aluminum okpomọkụ sink na-ewu na-okpomọkụ dissipation akwado maka 50,000 hours` lifespan. Ugboro ise nke bọlbụ omenala. Nke a Hps nke Kwesịrị Ekwesị 60w bụ nnukwu ọkụ na ọkụ. Mmiri ọkụ 5000K White...
Na ihe ịrịba ìhè mmepụta nke 7.200 lumens ma ọ bụ 120Lm / W na 360 directional ìhè, na 5000k zoro Nnọchi bọlbụ ghọtakwuo nnukwu ebe ma ime ụlọ na n'èzí na a crystal ọcha na-egbukepụ egbukepụ. E ji ígwè oyi na-arụ ọrụ na-eme ka anyị nweta 60w Led...
Ozugbo On: anyị 60w Dugara Post bọlb na-engineered na-amụnye kama mgbe mgba ọkụ na-flipped. Enweghi ike ichere ka ọkụ gị "kpoo ọkụ" Super Bright: Ngwá Ọrụ 175 nke Ngwá nke Akpụkpọ ụkwụ bụ 7800Lm 6000k na-acha ọcha na-acha ọcha na E26 E39...
China 175w Metal Ride Replacement Ngwa
175w Metal Ride Replacement n'ihi na oriọna na-enye ohere na post n'elu, mgbidi mgbidi na ngwa elu / obere mmiri maka ike ịrụ ọrụ nke ọma. 175 Mpịgharị nke Watt Led for bulbs for top posts, highbays storehouse, bollards and light lights. 175W Metal Halide Dugara Oriọna e mere na-dabara na ẹdude zoro fixtures.Bbier 's smart drive 175W Metal Halide Dugara Equivalen t bụ ezigbo ihe ngwọta iji kwalite metal halide ala na elu n'ọnụ mmiri fixtures.
Nke a bụ 50Watt, 6500lumen Commer steel Halide Led Replacemen bụ nnọchi zuru oke maka ihe dị oké ọnụ ahịa nke dị oké ọnụ, ikuku ọkụ na kọmpat fluorescent bulbs.60W Ogige ọka Ọkụ na-enwe ngwa ngwa zuru ụwa ọnụ ma nwee ike ịchekwa 80% na eletrik ọkụ mgbe e jiri ya tụnyere HPS / HID / MH / INCANDESCENT / CFL ọkụ na ndozi ha na-edochi.
175W Ngwakọta nke ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ 175 Watt Led 175W Mkpụrụ Na-acha Ọkụ Mmiri 175W Metal Halide Kwadoro Kwesịrị 150W ụgbọ ọkụ ọkụ